Umkhakha wezinto zikazibuthe waphakade waseChina udlala indima ebalulekile emhlabeni. Awekho kuphela amabhizinisi amaningi abandakanyeka ekukhiqizeni nasekusebenziseni, kepha futhi nomsebenzi wokucwaninga ubukade ukhona. Permanent uzibuthe izinto ikakhulukazi zihlukaniswe ezingavamile umhlaba uzibuthe, uzibuthe metal unomphela, esiyinhlanganisela uzibuthe unomphela futhi ferrite uzibuthe unomphela. Phakathi kwazo, uzibuthe womhlaba ongajwayelekile we-Neodymium ngumkhiqizo osetshenziswa kabanzi futhi osathuthuka ngokushesha.
1. I-China isizakala ngezinto ezingavamile zomhlaba zikazibuthe we-Neodymium.
I-China ingumkhiqizi omkhulu kunayo yonke yamaminerali omhlaba angavamile, ibalwa ngama-62.9% emikhiqizweni yamaminerali engajwayelekile ngokuphelele ngo-2019, ilandelwa yi-United States ne-Australia, ebalwa ngo-12.4% no-10% ngokulandelana. Ngenxa yezinqolobane zomhlaba ezingandile, iChina isiphenduke isisekelo esikhulu kunazo zonke emhlabeni sokukhiqiza nokuthekelisa omazibuthe bomhlaba abangajwayelekile. Ngokwezibalo zeChina Rare Earth Industry Association, ngonyaka ka-2018, iChina yakhiqiza amathani ayi-138000 odonsa bakwaNeodymium, okubalwa ngama-87% womkhiqizo ophelele emhlabeni, cishe izikhathi eziphindwe kayishumi zeJapan, eyesibili ngobukhulu emhlabeni.
2. Rare earth Neodymium magnets are kabanzi emhlabeni.
Ngokombono wezinkambu zohlelo lokusebenza, uzibuthe osezingeni eliphansi we-Neodymium usetshenziswa kakhulu ekumaketheni kazibuthe, ukuhlukaniswa kukazibuthe, ibhayisikili kagesi, ukugoqa imithwalo, ukugoqa umnyango, amathoyizi neminye imikhakha, ngenkathi ukusebenza kukazibuthe we-Neodymium kusetshenziswa kakhulu ezinhlotsheni ezahlukahlukene zikagesi ama-motors, kufaka phakathi i-motor yokonga amandla, imoto yezimoto, ukukhiqizwa kwamandla omoya, imishini yokulalelwayo ebonakalayo, i-elevator motor, njll.
3. Izinto ezingavamile zomhlaba zaseChina zeNeodymium zikhuphuka kancane.
Kusukela ngo-2000, iChina ibe ngumkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni womazibuthe abangavamile beNeodymium. Nge ukuthuthukiswa izicelo umfula, okukhipha NdFeB uzibuthe izinto eChina ibilokhu ikhula ngokushesha. Ngokuya ngemininingwane ye-China Rare Earth Industry Association ngo-2019, ukukhishwa kwezikhala ze-Neodymium ezingenalutho kwakungamathani ayi-170000, okubalwa ngo-94.3% womkhiqizo ophelele we-Neodymium magnetic materials ngalowo nyaka, i-NdFeB eboshiwe yaba ngu-4.4%, nokunye okuphumayo yaba ne-1.3% kuphela.
4. Ukukhiqizwa kukazibuthe waseChina iNeodymium kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokukhuphuka.
Ukusetshenziswa komhlaba wonke kwe-NdFeB kusatshalaliswa embonini yezimoto, ibhasi nojantshi, irobhothi elihlakaniphile, ukukhiqizwa kwamandla kagesi nezimoto zamandla ezintsha. Izinga lokukhula kwalezimboni ezingenhla eminyakeni emihlanu ezayo lonke lizodlula i-10%, okuzoholela ekwandeni komkhiqizo weNeodymium eChina. Kulinganiselwa ukuthi ukukhishwa kukazibuthe weNeodymium eChina kuzogcina izinga lokukhula kwama-6% eminyakeni emihlanu ezayo, futhi kuzodlula amathani angama-260000 ngonyaka ka-2025.
5. Isidingo sokusebenza okuphezulu kwezinto ezingabonakali zomazibuthe womhlaba kulindeleke ukuthi sikhule.
Ukusebenza okuphezulu odonsa omhlaba abangajwayelekile basetshenziswa kakhulu emikhakheni yezomnotho enekhabhoni ephansi, efana nokonga amandla kanye nemboni yokukhiqiza yokuvikela imvelo. Njengoba amazwe omhlaba wonke etshala imali eningi emkhakheni wokukhiqiza onekhabhoni ephansi, okonga ugesi kanye nowokuvikela imvelo futhi ethuthukisa imikhiqizo eluhlaza, amazwe atshala imali kakhulu embonini yokukhiqiza ikhabhoni ephansi, yokonga ugesi kanye neyokuvikela imvelo futhi akhuthaze imikhiqizo eluhlaza Ngokuthuthuka okusheshayo izimboni ezisafufusa njengezimoto ezintsha zamandla, amarobhothi akhiqiza amandla omoya kanye nokukhiqiza okuhlakaniphile, isidingo samandla omazibuthe abangavamile abasebenza kakhulu kulindeleke ukuthi sikhule. Ngokuthuthuka okusheshayo kwezimboni ezisafufusa, kulindeleke ukuthi kukhule isidingo semisebenzi ephezulu kazibuthe womhlaba ongasebenzi.